China Umu Ohu Ogige Uhie 3900lm China Manufacturers & Suppliers & Factory
Umu Ohu Ogige Uhie 3900lm - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Umu Ohu Ogige Uhie 3900lm)
30w Ìhè Ogige Pụrụ Ìhè 3900lm
Bbier 30w Daylight Garden Pole Light 3900lm bụ nnukwu na-enwu gbaa na nnukwu lumens irè 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a Ìhè Garden osisi Light 30w nwere ezi heatsink imewe gosiri maka 50000 awa nke ndụ. Nke a 30w LED N'èzí Ìhè dị mma Mee 2-3 / 8 anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa ahụ mfe mfe ịwụnye ọkụ...
150W Ngosipụta uhie ụlọ maka ihe eji ere
Ụlọ ọkụ ọkụ nke Ụlọọrụ 150W bụ 130lm / w na 19500 lumens. Ejiji ọkụ ụlọ anyị 150w maka ire ere nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ebube echichi maka nke a Vintage Warehouse Light Fixtures bụ 5-7m. A na- eji ụlọ nkwakọba ihe ọkụ a maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ihe omumu, ụgbọ ala na wdg. Anyị bụ ụlọ...
30W Epeepe Okpu Uhie
Igwe Uhie anyanwụ na-enwu gbaa 30w bụ ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa nchekwa dịpụrụ adịpụ. Nke a na- enwu ọkụ maka anyanwụ na-ewu na batrị lithium na usoro nkwụghachi na-enye ọnọdụ siri ike, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Ewube Owu Osimiri Uhie nwere oghere ehihie na abalị na ụda ihe ntụgharị nke na-ejikwa...
E26 E27 12W Okpuru Umu Akwukwo Nsogbu 277 Volt
12W Led Corn Bulb Lowes na- anọchi bọlbụ 40W na nke a Led Corn Bulbs for Sale nwere ike ịchekwa ruo 90% na ọkụ eletrik ọkụ. Ruo 1440 Ọtụtụ ìhè nke ìhè n'ehihie, ìhè ọkụ ndị a na-acha ọkụ ọkụ 277 Volt na- agbasa n'otu mpaghara buru ibu, ma na-enwu gbaa. Ebu ọka ọka anyị 4000k na-ebute anyị n'otu ntabi anya...
edu ogige ogige nke ìhè anyanwụ 50W
eduziri oghere nke mbara igwe na-enwupụta ìhè Mgbe chi jiri, 50 W Solar Post Light ga-akpaghị aka-atụgharị na na-enwu a na-ekpo ọkụ na-acha ìhè site na mmiri ozuzo iko panes na a ìhè nke 140 lumens on a zuru anyanwụ ụgwọ. Nke a dugara Solar Post ebe ìhè ga-atụgharị na-akpaghị aka mgbe anyanwụ na-aga ala na uche anya...
20W Ogige Ubi Na-agbanye n'Ugwu
20W Ogige ndị a kụrụ n'ubi Post Top Light Njirimara: 1. Nchebe ndi mmadu na ndi mmadu, ndi mmadu nwere ike ime gburugburu ebe obibi. 2.Otu jijiji, mgbochi mmiri, enweghị ntighari, enweghị ihe ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4.Ibu akwa ibe ya. 5.100% Ngwongwo...
20W Ogige Ugwu Ogige N'èzí N'elu Okpomọkụ
20W Ogige Ugwu Ogige N'èzí N'elu Okpomọkụ Njirimara: 1. Nchebe ndi mmadu na ndi mmadu, ndi mmadu nwere ike ime gburugburu ebe obibi. 2.Otu jijiji, mgbochi mmiri, enweghị ntighari, enweghị ihe ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4.Ibu akwa ibe ya. 5.100% Ngwongwo...
20W Na-agbanye ọkụ n'ubi ogige
20W Na-agbanye ọkụ n'ubi ogige N'abalị, ndị 20W mere ka ogige ogige ubi dị ọkụ ga-emegharị ma na-enwu ọkụ na-acha ọkụ na-acha site na mpempe mmiri mmiri ozuzo na-enwu ọkụ nke 140 lumens na ụgwọ zuru ezu. Nke a Mere Mgbasa igwe anyanwụ ga-agbanye na-akpaghị aka ozugbo anyanwụ dara ma gbanyụọ mgbe anyanwụ...
25Wenwe ogige ala maka mbara ala
Nke a nile na 25W Nwuo Igwe Osimiri maka Parks Ezubere iji rịgoro n'elu ogige dị. Azụmahịa Ọdịda Anyanwụ nke Ahịa dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Ike a kachasị dị egwu nke anyanwụ na -adabere na ọnụọgụ abụọ SMD nke nyere 3750 Lumens na njirimara zuru ezu....
25W Ngwongwo ogige nke ogige osisi
25Wụcha Agbanwu Uhie
Nke a niile na-na- Azụmahịa anyanwụ anyanwụ n'èzí Ezubere iji rịgoro n'elu ogige dị. Mbara Igwe Na-enwu dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a dị iche iche na- enwu gbaa n'okporo ámá anyanwụ na -adabere na SMD LEDs nke na-enye 3750 Lumens na njuputa...
25W Ogige nke dị n'èzí na-echekwa ogwe ọkụ Leta
Nke a nile na- adọba ụgbọala ọ bụla na- adọba ụgbọala Ezubere iji rịgoro n'elu ogige dị. Okpomọkụ n'èzí n'èzí dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a 25W Led Road Light na -ejiri ya na SMD LEDs nke na-enye 3750 Lumens na ọnọdụ zuru ezu. Nke a pụrụ...
20w 150mm / w square Anyanwụ Ogige ọkụ
Nke a dị otu narị mita abụọ na iri ise na iri ise na ise Ezubere iji rịgoro n'elu ogige dị. 150lm / w square Okpokoro Ogige Uhie dị mma maka onye ọ bụla chọrọ iji dochie mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a dị iche iche nke anyanwụ 202m / w dị mma nke SMD LED nke na-enye 3750 Lumens na ọnọdụ...
25N Ogige igwe na-acha n'èzí
A na- emepe Panel nke a niile na-eme ka ọ dị n'elu ugwu. Igwe ọkụ dị na mbara igwe dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche na- acha ọkụ na-acha anyanwụ na -adabere na SMD LEDs nke na-enye 3750 Lumens na njuputa zuru ezu mode. Ụzọ a pụrụ iche na ọkụ...
Akara 25W Igwe Mbara Igwe Maka Ogige Gị
A na-eme ihe a niile n'ime 25w Ogige Ubi Ogige Ubi na-agbanye n'elu otu ogwe osisi dị. Okpokoro Ogige Ubi Mgba Igwe dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a dị egwu nke anyanwụ maka ogige gị ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru ezu....
Ụzọ Okpokoro Osisi Ugbo Ala Ahu Uzo Ohu Uzo Ohu
Nke a niile n'ime 25w Ụzọ Owu Osisi Ugbo Ezubere iji rịgoro n'elu ogige dị. Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ Uhie dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a dị iche iche na- acha ogige dị mma nke SMD LED nke na-enye 3750 Lumens na ọnọdụ zuru ezu. Nke a na-ama ogige...
25W Okpokoro Okpokoro Okpokoro Ogige Ubi
Nke a dịka 25w Na-enwu Ogige Ugbo Okpokoro Ogige a na-eme ka ọ dị n'elu ugwu. Ogige Osisi Okpomọkụ dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche Ogige Ubi ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru ezu. Nke a pụrụ iche ogige anyanwụ...
50W na-eduzi ogige ọkụ ọkụ
50W na-eduzi ogige ọkụ ọkụ N'abalị, 50W na-eduzi ìhè anyanwụ ga-agbanwe na-akpaghị aka ma na-enwu gbaa ọkụ na-acha ọkụ ọkụ site na mbadamba mmiri mmiri ozuzo na-egbuke egbuke nke 140 lumens na ụgwọ zuru ezu. Nke a mere ka ogige ọkụ dị na mbara igwe ga-agbanye na-akpaghị aka mgbe anyanwụ dara ma laa mgbe anyanwụ...
Umu Ohu Ogige Uhie 3900lm Uhie Ohu Ogige Uhie Light 9750lm Uhie Ohu Ogige Uhie Light 18000lm Ogige Uhie 3900 Lumens Ogologo Ubi Ogige Uhie 13000lm Ogwe Uhie Elu - 3900lm Ugo Ogugu Uhie - 9750lm Led Ogige Uhie 50W